Ogaden News Agency (ONA) – Austria oo Xidhay Masaajid & Imaamyo Latarxiiley.
Austria oo Xidhay Masaajid & Imaamyo Latarxiiley.
Posted by ONA Admin	/ June 10, 2018
Dalka Austria oo ka tirsan Midowga Yurub (EU) ayaa albaabada u laabey ugu yaraan todoba masaajid oo muslimiinta dalkaasi ku cibaadeysan jireen, waxaana ay dalkeeda ka tarxiishey dhawr Imaam.
Sababta loo xirey Masaajida isla markaana loo tarxiiley shuyuukhda ayaa lagu sheegay ka hortaga siyaasadda Islaamka iyo goobaha lagu barto wax loogu yeeray xagjirnimo, sida uu sheegay Raysalwasaaraha dalkaas Sebestian Kurz.
Raysalwasaaraha Austria Mr Kurz ayaa ka tirsan xisbiga muxaafidka ee conservative OVP, waxaana uu Dowladda la soo dhisey Xisbiga ku dhisan ajaanib nacaybka ee FOPO. Xukuumadda ayaa sheegtey arrintan in ay tahay bilow oo ay qarka u saaran yihiin ugu yaraan 60 imaam in dalka laga masaafuriyo, kuwaas oo ay sheegeen in ay lacago ka qaadaan hay’ado kale oo shisheeye.
Dalka Turkiga ayaa canbaareeyey talaabada Masaajida lagu xirey iyo tarxiilka loo geystey Imaamyada. Dalka Austeria ayaaa dadka ku nool ay gaarayaan 8.8 milyan oo qof, waxaana Muslimiinta dalkaas lagu qiyaasaa 600 000 oo qof oo Muslimiin ah.